Imibhalo nge Ronald Gabriel
U-Ronald Gabriel ungumhleli Womsizi ku- Commerce Mentors. Uneminyaka engaphezu kwe-8 yokuhlangenwe nakho kokubhala mayelana ne-eCommerce, Retail, Marketing, kanye Nobuchwepheshe. Futhi ungumfana wezinombolo ojabulela i-Crossword ne-Sudoku yakhe. Uma engahleli noma engabhali, angatholwa ebuka ukuphinda kwe-Animes futhi edweba ezinye izinhlamvu ezingezakhe.
Ukukhangisa Kokuziphatha Kuqhathaniswa Nokukhangisa Kwengqikithi: Uyini Umehluko?
NgoMsombuluko, Januwari 3, 2022 NgoMsombuluko, Januwari 3, 2022 Ronald Gabriel
Ukukhangisa kwedijithali ngezinye izikhathi kuthola i-rap embi ngezindleko ezihilelekile, kodwa akunakuphikwa ukuthi, uma kwenziwa kahle, kungaletha imiphumela enamandla. Into ukuthi ukukhangisa kwedijithali kwenza ukufinyelela okubanzi kakhulu kunanoma yiluphi uhlobo lokumaketha kwemvelo, yingakho abakhangisi bezimisele kakhulu ukuchitha kukho. Impumelelo yezikhangiso zedijithali, ngokwemvelo, incike ekutheni zihambisana kanjani nezidingo kanye nezinto ezifunwa yizithameli eziqondiwe.